Idaatuu Progiramingii LibreOffice Calc keesaatif
Malli Idaatuuwwan Calc armaan gad keessatti ibsameetiin bal'isuu hojiin ala ta'eera. Idaatuuwwan dura jiran waliin akka walsiman mirkaneeffachuuf quunnamoonni ammas gataa'oo fi deeggaramoodha, garuu Idaatuuwwan haaraa saganteessuuf fankishinoota API haaraa fayyadami.
LibreOffice Calc Idaatuuwwaniin, moojuulota saganteessuu alaa wardiiwwaniin hojjachuuf fankishinoota dabalataa kennaniin bal'achuu danda'a. Kanneen Masaka Fankishinii keessaa akaakuu Idaatuu keessatti tarreeffamaniiru. Idaatuu ofuma keetiin saganteessuu yoo barbaadde, Idaatuun milkaa'inaan akka miiltessamu fankishinoota kamtu manbarroo yagutootiin DLL alaatiin akka alergame baruu ni dandeessa.
LibreOffice ukaankaa keessatti ida'ii qindaayina keessatti qindaa'e barbaada kuusaa sagantaa hiraa mijataa DLL. LibreOffice dhaan fudhatama argachuuf, kuusaa sagantaa hiraa DLL amaloota addaa qabaachuu qaba, akka armaan gadii keessatti ibsametti. Odeeffannoon kun keessatti-ida'ii mataa kee akka saganteesitu si gargaara Faankishinii MasakaaLibreOffice Calc.
Kuusaan sagantaa keessatti-ida'ii hundi faankishinoota ni kennu. Faankishinootni gariin dhimma bulchiinsaaf oolu. Faankishinoota keetiif maqaa barbaadde filachuu dandeessa. Haa ta'u malee, ulaagaa dabarsuu irratti seeroota barbaachisan hordofuu qaba. Waliigalteewwan maqaa kennuu fi waamuu sirrii hujeffannoowwan adda addaaf tokko miti.
Faankishinootni Kuusaa Sagantaa Hiraa AddIn DLL
Gadaanaatin, faankishinootni bulchiinsaa FaankishiniiLakkaawwiiArgadhu fi FaankishiniiDeetaaargadhuu jiraachuu qaba. Kana fayyadamuun, faankishinootni akkasumas gosootni ulaagaa fi gatiiwwan deebii argamuu danda'u. Akka gatiiwwan deebiitti, gosootni dachaa fi diraa ni deeggaramu. Akka ulaagaaleetti, dabalataan naannoowwan mandhee Waraantoo Dachaa, Waraantoo Diraa, fi Waraantoo Mandhee ni deeggaramu.
Ulaagaaleen wabii fayyadamuun ni dabarfamu. Kanaafuu, jijjiirraan gatiiwwan kanaa bu'uuraan ni danda'amu. Haa ta'u malee, kun LibreOffice Calc dhaan hin deeggaramu sababni isaas wardii waliin hiikkaa hin kennu.
Kuusaaleen sagantaa yeroo figsisaa irra deebi'anii fe'amuu danda'u akkasumas qabeentootni isaanii faankishinoota bulchiinsaan yaadamuu danda'u. Faankishinii tokkoon tokkoof, odeeffannoon lakkaawii fi gosawwan ulaagaalee, maqoolee faankishinoota keessaa fi alaa akkasumas lakkoofsootni bulchiinsaa ni jiraatu.
Fankishiniin hala wal simeen wamuun bu'aawwan hatattaman kenna.Fankishinoota yeroo riyaalii(fankishiniiwwan wal hin simnee) akkasumaa ni dandanda'ama,haata'uu malee,sababa wal xaxoo ta'aaniif baal'inaan hin ibsaman.
Oddeeffannoo walii galaa wa'ee walqunnama
Lakkoofsi olaantoo jijjiiramaa fankishinii idaatoo LibreOffice Calc maxxanfame 16 dha:gatiin deebi'uu tokko fi jijjiiramoota fankishinii olaanoo hanga 15 naqa.
Akaakuuwwan deetaa akkaa armaan gaditti hiikamu:
Foddaawwan: FAR PASCAL (_far _pascal) jala
kan biraa: durtii(durtii gooree sirna dalagaa)
Intijeerii bayitii 2 mallattoo hin qabne
dhangii hujeffannoo-hirkataa bayitii 8
hujeffannoo-hirkataa kan akka int
PTR_DOUBLE =0 qaree gara dachaatti
PTR_STRING =1 qaree gara diraa zeroon dhaabbatutti
PTR_DOUBLE_ARR =2 qaree gara waraantoo dachaatti
PTR_STRING_ARR =3 qaree gara waraantoo diraatti
PTR_CELL_ARR =4 qaree gara waraantoo man'eetti
Fankishiinotamana kitaaba yagutooDLL
Itti aansuun ibsa fankishinoota kanneenii argachuu dandeessa, kan mana kitaaba yagutoo alaantoo DLL keessatti waamaman.
Fankishiinotamana kitaaba yagutooDLL hundaaf, kan armaan gadii ni fayyada:
void CALLTYPE fn(bahaa, naqa1, naqa2, ...)
Bahaa: Gatii argame
Galchii: Lakkoofsa kamiyyuu kan akaakuun (double&, char*, double*, char**, Bal'ina man'ee), iddooBal'inni man'ee waraantoo akaakuu waraantoo dachaa, waraantoo diraa, ykn bal'ina man'ee ti.
Lakkoofsa fankishinoota taliiga fankishinii hin qabnee kan ulaagaa wabii kenna. Tokkoon tokkoo fankishinii gidduu 0 fi ncount-1 keessa jiran lakkoofsa qofa mataa issaanii qabu. lakkoofsi kun booda fankishinoota GetFunctionData fi GetParameterDescription dhaf ni barbaadama.
Bahaa: Jijjiramaatti wabii ta'a, kan fankishinoota Add-In bay'ee akka qabuutti yaadame. Fakkeenyaf: Yoo Add-In fankishinoota 5 LibreOffice Calc dhaf kenne, nCount=5 ta'a.
Infoormeeshiniiwwan babarchisaa wa'ee fankishinii Add-In hunda murteessa.
Galchii: Lakkoofsa fankishinii gidduu 0 fi nCount-1, hin hammatu.
Bahaa: Maqaa fankishinii akka progiraamariidhan hojjatameetti, akka mana kitaaba yagutoo DLL keessatti moggaafametti.Maqaan kun maqaa Dhullee keessatti fayyadu hin murteessu.
Bahaa: Lakkoofsa ulaagaalee fankishinii AddIn keessaati.Lakkoofsi kun irra gudda 0 ta'uu qaba, sababiin yeroo hundaa gatiin argame ni jira; gatii guddaan 16.
Bahaa: Qaree gara waraantoo sirrumaan jijjiiramtoota 16 kan akaakuu paramtype.Galchiiwwan nParamCount jalqabaa akaakuuu ulaagaa mijawaatin gutama.
Bahaa: Maqaa fankishinii akka fayyadamaadhan hubatametti, akka Dhullee keessatti mul'ateetti. Umlauts qabaachuu danda'a.
Ulaagaaleen pFuncName fi pInternalName waraantoowwan arfiiti, kan LibreOffice Calc keessatti hammamtaa 256n hojjoome dha.
Fankishinii Add-In fi ulaagaalee isaatif ibsa gabaabduu kenna. Akka dirqaalatti, fankishiniin kun fankishinii fi ibsa ulaagaa Dhullee keessaa agarsisuu danda'a.
Naqaa: Lakkoofsa fankishinii mana kitaabaa keessaa; giduu 0 fi nCount-1.
Naqaa: Ibsi ulaagaa kamiif akka hojjome eera;ulaagaaleen 1 irraa ka'u. Yoo nParam 0 ta'e ibsi mata isaatin akka pDesc keessatti kennameetti yaadama; haala kanarratti, pName hiika homaatuu hin qabu.
Bahaa: Maqaa ulaagaa ykn akaakuu fudhata, fakkeenyaf, jecha "Lakkoofsa" ykn "Diraa" ykn "Aduu", fi kkf. LibreOffice Calc keessatti akka chartti hojjama.
Bahaa: ibsa ulaagaa fudhata, fakkeenyaf, "gatii iddoo marlaaltoon itti shallagamu." LibreOffice Calc keessatti akka chartti hojjooma.
pName fi pDesc waraantoowwan arfiiti. LibreOffice Calc keessatti hammamtaa 256n hojjooma. Hubadhu iddoo duwwaan Dhullee keessatti argamu kan daanga'e fi kanaafuu arfiileen 256 gutuun gutuutti fayyadamuun hin danda'mu.
Gabateewwan armaan gadii odeeffannoo wa'ee caasawwan deetaa kan muraa pirogiraamii alaantootin naannoowwan man'ee murteessuf laatamee qaba. Akaakuu deetaa irratti hundaa'uun, LibreOffice Calc'n waraantoo garagaraa sadi addaan baasa.
Akka ulaagaatti, naannoon man'ee gatiiwwan lakkoofsa/Akaakuu dachaa wajjinii hikamuu danda'u. Waraantoon dachaa LibreOffice Calc keesssaa akka armaan gadiitti hiikama:
Lakkoofsa tarjaa golee gubbaa-bitaa kan bal'ina man'ee keessaati. Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa tarree golee gubbaa-bitaa kan bal'ina man'ee keessaati. Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa gabatee golee gubbaa-bitaa kan bal'ina man'ee keessaati; Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa tarjaa golee jala-mirgaa kan bal'ina man'ee keessaati. Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa tarree golee jala-mirgaa kan bal'ina man'ee keessaati; Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa gabatee golee jala-mirgaa kan bal'ina man'ee keessaati; Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa misensota armaan gadii. Man'eewwan duwwaan hin lakkaawwaman ykn ni taramu.
Lakkoofsa tarjaa miseensaa. Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa tarree miseensaa; Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa gabatee miseensaa; Lakkoofsa kennuun 0 irraa eegala.
Lakkoofsa dogongoraa, gatiin 0 akka "Dogongorri hin jiru"tti hiikama. Yoo miseensi man'ee formulaa irraa dhufe gatiin dogongoraa formulaadhan murteeffama.
Jijjiramaa Iee baayitii 8 kan akaakuu dachaa/ xuqaa Bololi'uu
Miseensa itti aanu
Nannoo man'ee, kan gatiiwwan akaakuu deetaa barruu qabuu fi akka waraantoo diraatti hiikame. Waraantoon diraa LibreOffice Calc keessaa akka armaan gadiitti hiikamu:
Dheerina dursaa armaan gadii, cufaa baayitii duwwaa dabalachuun.Yoo dheerinni cuufaa baayitii duwwaa gatii qaraa waliin wal qixa ta'ee baayiiinduwwaa lamata dursaatti ida'amuun gatiin guutuun argama.Kanaafuu,Len ((StrLen+2)&~1) fayyadamun shallagama.
Dursaa Cuufaa baayitii duwwaa waliin
Waraantoowwan man'ee nannoowwan man'ee barruu akkasumaas lakkoofsota qabate wamuuf fayyada.Waraantoo man'ee LibreOffice Calc akka armaan gaditti hiikama:
Akaakuun qabeenya man'ee, == Dachaa, 1 == Diraa
Gatii ykn Dheerina
Yoo akaakuun == 0:8 baayitii IEEE jijjirama akaakuu dachaa/tuqaa bololi'aa
Yoo akaakuun == 1: dheerinni dursaa armaan gadii,baayitii duwwaa cufaa dabalachuun.Yoo dheerinni baayitii duwwaa cufaa gatii qaraa waliin wal qixaa ta'ee baayitii duwwaa lammataa dursaatti ida'amuun kanaafuu gatii gutuu argamsiisa.Kanaafuu,dheerinni ((StrLen+2)&1) fayyadamuun shallagama.
yoo akaakuun==1 26
Yoo akaakuun == 1: dursaan baayitii cufaa duwwaa waliin
32 ykn 26+Len
Title is: Idaatuu Progiramingii $[officename] Calc keesaatif